အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Archives - Page2of 19 - Latest Myanmar News
ဆန်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (သို့) မျက်နှာလိမ်းတဲ့ cream လုပ်နည်း သင်သိပါသလား? ဆန်ပြုတ်ဆိုတာ စားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး စကွင်းကဲလို့လည်း ရတယ်ဆိုတာ… ဒီတစ်ပါတ်ရဲ့ topic ကတော့ “ဆန်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (သို့) မျက်နှာလိမ်းတဲ့ cream လုပ်နည်း”ပါရှင့်… စိတ်ဝင်စားစရာ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးမို့ Irene ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ကြည့်ရင်း အဆင်ပြေတာကြောင့် အခုလို ပြန်လည် sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဆန်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အသားအရေအတွက် အင်မတန်အာနိသင်ရှိတဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်တစ်ခုပါပဲ… ! အဓိကအားဖြင့်… မျက်နှာတင်းရင်းစေခြင်း၊ နုပျိုစေခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ အသားအရေကို ပြန်လည်ကျန်းမာစေခြင်း၊ အရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း၊ နေလောင်အကွက်များ၊ အမဲစက်များ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ခြင်း စသည့် ဂုဏ်သတ္တိများစွာ ပါဝင်ပါတယ် ပြုလုပ်ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ဆန် လက်တစ်ဆုပ်စာကို … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags မျက်နှာပေါင်းတင်နည် Leaveacomment
April 27, 2021 by Latest Myanmar News
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ဒိန်ချဉ် Leaveacomment
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags အလှအပ Leaveacomment
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags အမဲစက်၊ မှဲ့ခြောက် Leaveacomment
အချိန်လဲမပေးနိုင် အဖုပိမ့်တွေထွက်လာလို စိတ်ညစ်နေသူအတွေအတွက် အရေးပေါ် ပေါင်းတင်နည်း အရေးပေါ် ပေါင်းတင်နည်းအကြောင်း ဝေမျှပေးမယ်ရှင့် အလှပြင်ဖို့အချိန်သီးသန့်လည်းမပေးဖြစ် အပျင်းကလည်းထူ အစပ်လည်းလျော့မစားနိုင် ဒါပေမဲ့ အချိန်တန် မှန်ကြည့်တဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်း အမဲစက် အဖုပိမ့်တွေ ထွက်လာရင် စိတ်အရမ်းညစ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်လိုလူမျိုးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ခရမ်းချဉ် – ဝက်ခြံလျော့ပါး အာလူး – အဖုပိမ့် ချိုင့်ခွက် အသားပြန်ပြည့် ရှားစောင်းလက်ပတ် – အသားချောမွေ့ ဆန်ဆေးရည် – အရေးကြောင်းလျော့နည်းစေ သံပုရာ – အဆီပြန်သက်သာ (ဆိုးကျိုး အသားပါးလာစေတတ် ဝက်ခြံပေါက်နေသူများ မပြုလုပ်သင့် အရမ်းစပ်စေလို့ပါ ) အောင်မဲညိုအရည် – အသားအေးစေ သခွားသီး – အသားရေကြည်လင် မန်ကျီးသီးအရည် – အမဲစက်လျော့ပါး ကြက်ဥ/ဘဲဥအကာအရည် … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ပေါင်းတင်နည်း Leaveacomment
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်တဲ့အခါ ရလာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေ မီးဖိုချောင်မှာ အမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတဲ့ဟင်းချက်စရာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ဆားဟာ မထင်မှတ်ပဲ ဆံပင်အတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်လျှော်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အလှအပဆောင်းပါးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့လို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အလှအပဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဘာလို့ဆားထည့်ပေးသင့်တာလဲ? ဆားက သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်မှာလည်းလုံးဝမစိုးရိမ်ရပါဘူး။ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားစားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာလောက်ရောထည့်ပြီးလျှော်ပေးတာက… အဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဆားထည့်လျှော်ပေးတာက ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။လုံးဝအဆီမပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ လိုအပ်တဲ့အဆီပမာဏာပဲအဆီပြန်အောင်ထိန်းညှိပေးတာပါ။ အဆီပြန်တာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် ၂ရက်လောက်နဲ့အဆီပြန်တဲ့ဦးရေပြားဟာ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်မနေတော့ပဲ သုံးရက်လောက်နေမှ ခေါင်းလျှော်ပေးလို့ရသွားပါတယ်။တစ်ပတ်လောက်နဲ့တင် သိသာတဲ့ရလဒ်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဗောက်ထခြင်းနဲ့ဦးရေပြားပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဆားအနည်းငယ်ထည့်လျှော်ပေးတာဟာ ဗောက်ထခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသတဲ့။ဗောက်ထလို့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ပိုပြီးထိရောက်ချင်ရင် အိမ်သုံးဆားထက်ပင်လယ်ဆားကိုသုံးပေးပါ။ ပင်လယ်ဆားနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ရောစပ်ပြီးဦးရေပြားကိုအသာအယာ ၁၀ မိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ဦးရေပြားကိုပါသန့်စင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်။ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေတယ် ဆံပင်တွေခဏခဏကျွတ်နေရင် ဒီနည်းလေးကိုသာသုံးပေးလိုက်ပါ။အပေါ်ကနည်းအတိုင်း ဦးခေါင်းကို၁၀မိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပြီးလျှော်ကြည့်ပါ။အရင်လိုဆံပင်မကျွတ်တော့တာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဘယ်လိုဆားမျိုးက ဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲ? စားပြဲတင္ဆား အိမ်သုံးဆားက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုအထူးသက်သာစေတယ် သဘာ၀ဆား မသန့်စင်ရသေးပဲ သဘာဝအတိုင်းရရှိလာတဲ့ဆားက ဦးရေပြားပြဿနာတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ဆံပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြည့်ပေးတယ်။ ဆားခါး ဆားခါးကတော့စိမ်နိုင်ရင် … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ခေါင်းလျှော်ရည် Leaveacomment
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ခေါင်းလျှော်နည်း Leaveacomment
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ဆံပင် Leaveacomment
အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ချိုင်းကြားက အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၅) မျိုး …
အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ချိုင်းကြားက အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၅) မျိုး ချိုင်းကြားအသားအရေ မည်းနေတာကြောင့် လက်ပြတ်၊ချိုင်းပြတ်၊ဝတ်ဖို့ အခက်ေ တွ့တာ၊ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေမကူးနိုင်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် နည်းလမ်းကော င်းတွေကို အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်းတွေကလည်း နေအိမ်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ချိုင်းကြားအသားအရေ ဟာ နေရောင်နဲ့ လုံးဝမထိတွေ့ရတာကြောင့် အဲ့ဒီနေရာမှာ ဆဲလ်သေတွေစုပုံလာပြီး ချိုင်းကြား အသားအရေ မည်းညစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက စိတ်ကြိုက် နည်းလမ်းတစ်ချို့ ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးပါက ညိုမည်းနေတဲ့ ချိုင်းကြား အသား အရေကို သိသိသာသာဖြူဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)သံပရို သံပရိုရည်ဟာ ဗက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေး တစ်မျိုးြ ဖစ်သလို ညိုမည်းနေတဲ့ နေရာတွေကို အရောင်ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ အရောင်ချွတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သံပရိုကို … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags အသားအရေ
လည်တိုင်းနားတစ်ဝိုက် ညိုမည်းတာကို ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်
လည်တိုင်းနားတစ်ဝိုက် ညိုမည်းတာကို သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ Goodbye လို့နှုတ်ဆက်ကြရအောင် မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရင်း ငွေတွေ အများအပြား အသုံးပြုကြပေမယ့် လည်ပင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးဖို့ မေ့တတ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း ၁ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး လည်ပင်ပေါ်မှာ ပွတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ အသားအရေ ဖြူဝင်းစိုပြေလာမှာပါ။ နည်း ၂ ပါဝင်ပစ္စည်း စန္ဒကူး နံ့သာမှုန့် … Read more
Categories အလွအပ ႏွင္႔ က်န္းမာေရး Tags ညိုမည်းတာ